एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् थाइल्याण्ड ? - Deshko News Deshko News एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् थाइल्याण्ड ? - Deshko News
एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् थाइल्याण्ड ?
काठमाण्डौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह थाइल्याण्ड जाने भएका छन् । देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राख्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निजी सचिव सागर तिमल्सिनाका साथ भोलि साउन २४ गते शुक्रबार थाइल्याण्डको बैङ्कक जान लागेका हुन् ।